Please read these Terms and Conditions carefully before using the ZeeGwat App operated by DD Innova, Inc.
Provider will collect basic network information such as MAC address, IP address followed Mobile Device - Related Crime Act B.E. 2554.
False information orathreat to national security such as sniffing or hacking will be prohibited.
Distribution of child or underage pornography will be prohibited.
Do not allow to send spam, unsolicited bulk email or commercial mail that can’t unsubscribe.
โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้งานบริการ ZeeGwatโดย DD Innova Tech, Co.,Ltd.
ผู้ให้บริการขอเก็บข้อมูลพื้นฐาน อาทิเช่น MAC Address, IP Address ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ปี 2554
ห้ามมีการเขียนข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง เช่นการเจาะระบบ การดักข้อมูล
ห้ามผู้ ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ทางการค้าจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเดือดร้อนรำคาญ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้
ห้ามผู้ใด จำหน่าย จ่ายแจก ทำซ้ำ มีไว้ หรือทำให้แพร่หลายโดยประการใด ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรืออุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ปี 2554
เมื่อมีการกระทำความผิดไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งในข้อที่ 1 ถึง 6ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการกระทำของบุคคลดังกล่าว
ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของข้อมูลหรือโอกาสทางธุรกิจใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบ
เราอาจจะยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงบริการของเราได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือความรับผิดสำหรับเหตุผลใดๆ เพียงถ้าคุณละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลง
DD Innova Tech မှ, Co. , Ltd အားဖြင့်ဝန်ဆောင်မှု ZeeGwat မသုံးခင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခွအေနဂရုတစိုက်ဖတ် ကျေးဇူးပြု.
ရန် Access ကိုဒါမှမဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်း။ အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခွအေနကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ဆန္ဒရှိသောသူအပေါင်းတို့အဘို့သက်ဆိုင်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုပေးထိုကဲ့သို့သောရဲ့ MAC Address ကို, ထိုအက်ဥပဒေအားဖြင့် IP Address ကိုအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းလိမ့်မည်။ တစ်နှစ်တာ 2554 ကွန်ပျူတာ။
အဖြစ်မှန်မကိုက်ညီကြောင်းဒေတာရေးမနေပါနဲ့။ လုံခြုံရေးမှ Prejudicial ဥပမာ, ခိုးနားထောင်ခြင်း hacking ။
မည်သည့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်မေးလ်ခြင်း, လမ်းညွှန်ချက်တွေအများကြီးမပို့ပါနဲ့။ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ဝန်ကြီးများ စီးပွားဖြစ်များအတွက်အခြားလူတစ်ဦးအနှောငျ့အယှဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ စာလက်ခံသူကကွန်ပျူတာဒေတာသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်မေးလ်ခွင့်ပြုမအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ သင်ကလကျခံဖို့ရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ငြင်းဆန်ရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
အဘယ်သူမျှမလူတစ်ဦး, ဖြန့်ဝေမျိုးပွားသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုကျယ်ပြန့်ထုံးစံရရှိနိုင်စေရမည်။ ညွှန်ကြားချက်သို့မဟုတ်အထူးအက်ဥပဒေအောက်တွင်တစ်ဦးပြစ်မှုများအတွက် tool တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့ဖန်ဆင်းကွန်ပျူတာဒေတာ device ကို၏ဤအစု။ တစ်နှစ်တာ 2554 ကွန်ပျူတာ။
မှားယွင်းစွာသူတစ်ပါး၏ကွန်ပျူတာ system သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာဒေတာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဟာချက်ချင်းအသိပေးစာမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများရန်သင့် access ကိုရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ရပ်ဆိုင်းထားပေမည်။ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်မည်သည့်တာဝန်ယူမှု, ။ သငျသညျစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေားကိုခြိုးဖောကျသာလြှငျ။